Kọmitii Executive Airbus kpọrọ Onye isi ala Executive Executive
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Kọmitii Executive Airbus kpọrọ Onye isi ala Executive Executive
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Catherine Jestin sonyere na Kọmitii Executive nke Airbus dị ka EVP Digital na Njikwa Ozi
Isi ihe nke nzukọ ọhụrụ a ga-abụ iji kwado dijitalụ ọhụụ na gburugburu usoro mmepụta ihe nke Airbus na ngwaahịa na ọrụ anyị, na-eme ka nchịkọta data, ọgụgụ isi, akpaaka na ọrụ maka ndị ahịa Airbus yana nchekwa dijitalụ maka Companylọ Ọrụ ahụ.
Airbus SE nwere họpụtara Catherine Jestin dị ka EVP Digital na Ozi Nchịkwa.
Nhọpụta Catherine Jestin dị irè na 1 Julaị 2021.
Nhoputa a na-abia n'otu oge dị mkpa maka mgbanwe dijitalụ nke Airbus.
Airbus SE ahọpụtala Catherine Jestin dị ka onye isi oche Onye isi ala Digital na Ozi Njikwa, na-arụ ọrụ na 1 July 2021. N'ime ọrụ a, Catherine ga-esonye na Kọmitii Executive ma kọọrọ Guillaume Faury, onye isi Airbus.
"Nhọpụta a na-abịa n'otu oge dị mkpa maka mgbanwe dijitalụ nke Airbus, ka anyị si na nsogbu COVID-19 pụta ma kwadebe onwe anyị maka usoro ndị ọzọ na mmepe nke ọrụ obodo na nke ndị agha anyị," ka Guillaume Faury kwuru. “Isi ihe nzukọ ọhụrụ a lebara anya bụ ịkwalite ọhụụ dijitalụ na gburugburu usoro mmepụta ihe nke Airbus na ngwa ahịa na ọrụ anyị, na-eme ngwangwa nyocha data, ọgụgụ isi, akpaaka na ọrụ maka ndị ahịa Airbus yana nchekwa dijitalụ maka ụlọ ọrụ ahụ.”
Catherine ga-arụ ọrụ iji wusie ike ịmekọrịta mmegharị gafee ụlọ ọrụ Airbus na-arụ ọrụ nke ọma iji gaa n'ihu na-aga nke ọma na mmemme Digital Design, Manufacturing & Services (DDMS), nke e guzobere iji mee ka ikike ịmekọrịta ihe na usoro ntanetị dijitalụ. Ọ ga - ewelite ma hazie ọdọ mmiri dijitalụ dị na nzukọ a iji kwado mgbanwe nke ụzọ Airbus si arụ ọrụ site na teknụzụ dijitalụ nke oge a, teknụzụ na usoro, ma hụ na ụlọ ọrụ ahụ na-ebute ụzọ na gburugburu ebe obibi IT omume.
Ugbu a Catherine nwere ọnọdụ nke Chief Information Officer (CIO) na Airbus, ọrụ ọ na-arụ kemgbe March 2020. N'ọnọdụ a, ọ bụ ya na-ahụ maka ịkwọ ụgbọ ala nke usoro teknụzụ Ozi nka na azịza na nkwado nke ndị ọrụ Airbus, ndị ahịa na ndị na-ebubata ya. Tupu ọrụ a, Catherine bụ onye isi nchịkwa ozi na Airbus Helicopters, ọrụ ọ rụrụ site na July 2013 ruo February 2020.
Tupu ya abanye na Airbus, Catherine nwere ọnọdụ dịgasị iche iche, n'etiti 2007 na 2013 na Rio Tinto na Montreal, Canada n'ime ngalaba Information Systems & Technology (IS & T). Catherine mekwara afọ iri na asaa na Accenture wee họpụta ya na Onye Mmekọ na 17, ọkwá ọ nọrọ afọ ise.